Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Customer Service, Support အလုပ်အကိုင်များ
စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် Jobs in Myanmar
စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် အလုပ် 134 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
- အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးပါမယ် - customer complaint နိုင်နိုင်နင်းနင်းဖြေရှင်းတတ်ရပါမယ် -Facebook Page ကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် -Photo Editing ပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည် -Daily Photo လှလှရိုက်နိုင်ရမည် -Marketing Idea ကောင်းရှိပြီး ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းကြံဆ ရေးသားနိုင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: မနက်9- ညနေ ၅ ထိ တစ်ပတ် ၁ ရက်နား ( Sunday ) & Gazette
Taung Paw Thar
ပြည်ကြီးတံခွန် | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
(၁)ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် Customer များအတွက် ခရီးသွားကိစ္စ၊တည်းခိုနေထိုင်ရေးကိစ္စ စီစဉ်ပေးခြင်း။ (၂) ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော Events များစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ (၃) အစည်းအဝေးခန်းမနှင့် စည်းဝေးမှတ်တမ်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ (၄)Finger Print, Daily Attendance, Monthly Attendance Report များပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၅)ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပြန်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှုရှိ/မရှိ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၆)ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အစိုးရရုံးဌာနများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၇)ရုံးစာဝင်/စာထွက် ကိစ္စရပ်များ၊ ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပြန်ရသော ရုံးစာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၈) ကုမ္ပဏီ အဆောက်အဦ၊စက်ပိုင်ဆိုင်ရာနှင့် အခြားသော ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း စသော ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၉) ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ (၁၀) ကုမ္ပဏီ၏ စီမံရေးရားကိစ္စရပ်များအားလုံး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဘ်များ။
Online Admin Staff
Golden Shape Myanmar
- Page setting များ ကောင်းစွာအသုံးပြုတတ်ပြီး ကျွမ်းကျင် ပါးနပ်သူဖြစ်ရမည်။ - မြန်မာစာသတ်ပုံ၊ English Spelling များ အမှားအယွင်းမရှိ၊ စကားပီသသူ ဖြစ်ရမည်။ - Message များအား မြန်ဆန်မှန်ကန်ပြီး သိမ်မွေ့စွာ ဖြေဆိုနိုင်ရမည်။ -Fashion ပိုင်း Knowledge အသင့်အတင့်ရှိပြီး အမြင်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Post တင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ Message & Comments များသာ ဖြေကြားရပါမည်။ - စာရင်းများ မြန်ဆန်တိကျစွာ တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
တင်သောနေ့: 04 Dec 2021
- House Restaurant operation၏ အရှေ့နှင့် အနောက်ကိုပါ ကြီးကြပ်ပေးခြင်း။ - ဝန်ထမ်းများ evaluationsနှင့် experienceများကို မြှင့်တင်ရန် Customers ၏ Feedbackကို Analyze လုပ်ခြင်း။ - Cut Waste နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခြင်း။ - အပတ်စဉ်၊ လစဉ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများကို Reports တင်ခြင်း။။ - ဝန်ထမ်းအသစ်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ongoing training များပေးခြင်း။ - ဝန်ထမ်းများအတွက် အလုပ်အဆိုင်း(Work Shifts)များကို အချိန်ဇယားဆွဲပေးခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: - Meal and Travel allowance - Overtime payments - Rewards for over performance
Retail Sales Specialist (မြဝတီဘဏ်ခွဲ)
ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအကူ | Bank Teller
မြဝတီ | ကရင်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်
တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ အရောင်းဝန်ဆောင်မှု Customer ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အရောင်းများအားရရှိစေခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် Sales Target ထက်ကျော်မှီအောင် ကြိုးစားခြင်း။ Customer အသစ်များ (New To Bank) များရရှိရန် တာဝန်ယူခြင်း၊ အရောင်းအတွက်တာဝန်ယူခြင်း၊ အပ်ငွေနှင့် ချေးငွေလျှောက်လွှာများပြုလုပ်ခြင်း (အပြင်ထွက်ရောင်းချခြင်းနှင့် ဘဏ်တွင်းရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း)၊ အပြင်ထွက်ရောင်းချခြင်းများကို Marketing အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း၊ Events နှင့် မိမိကိုယ်တိုင်အပြင်သွား ရောင်းချခြင်း၊ လှည့်လည် ရောင်းချခြင်း၊ Customer များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ လက်ရှိ Customer (Existing to Bank) နှင့် အသစ် Customer (New to Bank) များအား ဖုန်းခေါ်ပြီး ရိုးမဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရှင်းပြခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဘဏ်အတွင်းရှိချိန်တွင် အရောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘဏ်သို့လာရောက်သော Customer များအား ရိုးမဘဏ် Customer ဖြစ်လာအောင် ဝန်ဆောင်မှုများ ရှင်းပြခြင်း၊ ရည်ညွှန်းကွန်ရက်များဖန်တီးပေးခြင်း၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်များ၊ လက်ရှိဖောက်သည်များ၊ မိမိနှင့် ရင်းနှီးသော ကွန်ရက်များနှင့် ဒေသတွင်းဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပူးတွဲအသုံးချ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဘဏ်တွင်းအမြတ်အစွန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ အပတ်စဉ် ဘဏ်ခွဲ၏ Weekly Sales Report များ ပြီးစီးပြီး Branch Manager ထံတင်ပြခြင်း၊ ရောင်းချရန် ပြင်ဆင်မှုများလည်း ပြုလုပ်ရမည်။ Customer ဝန်ဆောင်မှု Customer အတွေ့အကြုံတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အပြောင်းအလဲများအတွက် အကြံပြုခြင်း။ ဘဏ်အတွင်းနှင့်ဘဏ်အပြင် Customer ဝန်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှု ပြုခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။ Customer နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များနှင့် အရေးကြီးသော (သို့) မဖြေရှင်းရသေးသော ကိစ္စရပ်များအား အထက်လူကြီး သို့ အကြောင်းကြားခြင်း။ Customer များအတွက် သွက်လက်တက်ကြွသော အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရင်းနှီးဖော်ရွေသော အတွေ့အကြုံပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးရန်။
အကျိုးအမြတ်: - Annual Performance Bonus - OT Payment - Uniform provided
Jr. IT Support (တောင်ကြီး)
အလုပ်တွင်လိုအပ်သော ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သည့် software, hardware ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဆောင်ရွက်ရမယ် ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်ပစ္စည်းများတွင် PC, Laptop, Mobile phone application စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ရုံးတွင်း Network သွယ်တန်းခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး Network နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ရမယ်။ (File, FTP, Printer) လိုအပ်ပါက အခြားရုံးခွဲ ဌာနခွဲများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: international Standard
Recruiter active 27 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Recruiter active 59 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Banking Assistant (Chinese Speaking)
ပန်းပဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်း . ရန်ကုန်တိုင်း .
- တရုတ်သံရုံးတွင် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန် (ရုံးခွဲမှသွားလာရေးအတွက်တာဝန်ယူပေးမည်) - တရုတ်သံရုံးနှင့် ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများမှလိုအပ်သော အခြေခံဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုပေးရမည်။ - Customer များ၏ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ မေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြား ကူညီရမည်။ - QuickPay မှတစ်ဆင့် တရုတ်ဗီဇာကြေးများကို ကောက်ခံခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ရန် (ဉပမာ taking photo or photocopying) - To handle foreign exchange services - To handle daily reconciliations - To work closely with QuickPay Product Manager on product assignments - To carry out any other duties which may be assigned to you, from time to time The role holder is responsible for the smooth execution of over-the-counter visa fee collection and provision of ancillary services at the Chinese Embassy. The role holder is expected to provide outstanding customer service and protect the Bank’s image and Branding. In addition, the role holder is expected to to support banking service requests by the Chinese Embassy itself. Where possible, the role holder also helps to drive the usage of mobile and digital applications, in order to achieve economic and social development in Myanmar through nation-wide financial inclusion activities.
Great Myanmar Management Institute
(လယ်ယာထွက်ကုန်အရောင်းအဝယ် အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ခန့်ရန်) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အကျိုးအမြတ်: လစာအခြေခံနှုန်းထား + ကြိုးစားမှုပေါ်မူတည်၍ Commission + Bonus
အငယ်တန်းချေးငွေအရာရှိ (ဧရာ၀တီ ၆ ဦး)
အငယ်တန်းချေးငွေအရာရှိ – ၆ ဦး (Preferable Male) ပုသိမ် - ၃ ဦး၊ ကျူံပျော် - ၂ ဦး၊ ဟင်္သာတ - ၁ ဦး အဓိကတာဝန်များ - ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုသူများနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမည်။ - ဈေးကွက်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ချေးငွေနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူထံသို့ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း၊ ပြန်လည်ကောက်ခံခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရမည်။ - ချေးငွေလက်ခံထားသူများ၏ တိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်အကဲခတ်၍ အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်း၏တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိထံ သတင်းပေးပို့နိုင်ရမည်။ - ချေးငွေဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Import Office Staff
စတော့ရှယ်ယာမှာယူမှုအခြေအနေ (ပစ္စည်း၊ ဈေးနှုန်း စသည်ဖြင့်) ကိုစစ်ဆေးပြီး တင်သွင်းမှုမန်နေဂျာထံ သတင်းပို့ရမည်။ တင်သွင်းသည့်ဌာနအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းနှင့် ရုံးစာတို့ကို အချိန်မီပြင်ဆင်ရမည်။ မန်နေဂျာမှ ခွင့်ပြုထားသော PO ဖိုင်များတွင် ဒေတာစုရမည်။ ပို့ဆောင်မှုစာရွက်စာတမ်းနှင့်အချိန်ဇယားကိုကြည့်ရမည်။ သွင်းကုန်ဌာနအတွက် ရုံးစာနှင့် အချက်အလက်များ ရေးသွင်း နားလည်နိုင်ရမည်။ လိုအပ်သည့်အချိန်အတွင်း အကြီးတန်း၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီရမည်။ Customer Clearance အတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းကို စုဆောင်းရမည်။ လိုအပ္ပါက အျခား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္
အကျိုးအမြတ်: - performance ပေါ်မူတည်ပြီး rewardများရမည်။ - uniformပေးမည်။ - SSB ထောက်ပံ့ပေးမည်။"
Recruiter active 40 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Gold Aya Motors Int'l Group
မြင်းခြံ | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
ရုံးလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္း Attendance ေကာက္ျခင္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ မႏၱေလး ျမိဳ႕သာ စက္မႈဇုန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္
GYM နှင့်သတ်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည် ။ Computer ( Word, Excel ) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ GYM Attendance နှင့် CCTV အားနားလည်ရမည်။ Customer များကို စိတ်ရှည်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မြောက်ဒဂုံအနီးနေထိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
(အိမ်/ခြံ/မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအတွက် ခန့်ရန်) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(Great Myanmar Management Institute အတွက် ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည် အသင်းအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် သွက်လက်ထက်မြက်သူ ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်
ေခ်းေငြအရာရွိ (Loan Officer) - လက္ပံတန္း
လက်ပံတန်း | ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးတိုင်း
ေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားေရာက္ျပီး ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ ရိုးသားၾကိဳးစားျပီး အမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ရမည္ ေဒသခံ ဦးစားေပးမည္
- အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၂၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ - Computer (Word,Excel,Powerpoint) အားသုံးပြုနိုင်သူုဖြစ်ရမည်။ - Communication Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ - ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ် ရှိရမည်။
တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ လုပ်ငန်းရေးရာ - သွက်လက်တက်ကြွသော အရောင်းဝန်ဆောင်မှု Customer ၏လိုအပ်ချက်များကို သိရှိစေရန် သွက်လက်တက်ကြွစွာမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ (Sale & Service Teller ၊ Sale & Service Officer ၊ Account Manager ၊ Branch Manager စသည်) များအား ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။ Customer ဝန်ဆောင်မှု Customer များအသုံပြုလိုသော ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တွင် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် - မိမိလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအသီးသီး၏ အချက်အလက်များအား သိရှိနားလည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသို့ မြန်ဆန်စွာချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။ Customer Service Standards များအား အသုံးပြု၍ ရင်းနှီးဖော်ရွေပြီး စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။ လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘဏ်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရန်။ တစ်နေ့တာစာရင်းပိတ်ရာတွင် အမှားအယွင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။ Customer မကျေနပ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန် follow-up လုပ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သေသပ်စွာ ဖြေရှင်းပေးရန်၊ လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်။ ငွေကြေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာများကို ကျွမ်းကျင်စွာ သိရှိနားလည်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
ရုံးလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္း Attendance ေကာက္ျခင္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္
ပန်းပဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
- Admin & HR Management ပိုင်း အတွေ့အကြုံ ၂ နှစ် အနည်းဆုံးရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၇-၃၅) နှစ်ကြား ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာ( i Office,Internet and Email) ကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ - အင်္ဂလိပ် ရေး ၊ဖတ်၊ပြော အသင့်အသင့် ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
ဆိုင်ခွဲတာဝန်ခံ - ကျား ၁ဦး
Tine Kyaw Gas Station
မိုးမောက် | ကချင်ပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်
- ဆိုင်အိပ်ဆိုင်စား စရိတ်ငြိမ်း နေထိုင်နိုင်သူျဖစ္ရမည္ - စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူျဖစ္ရမည္ - ဆီဝင်ဆီထွက်နှင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေစာရင်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေးကြီးကြပ်ရမည္ - ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည္
Junior Loan Officer (Ayeyawady)